Myanmar (or) Burmese Classical music or song Harp Played by Saung U Ba Than တောနှင့်တောင်စွယ်(ယိုးဒယား ကြေးသွား) - ထား တီးခတ်သူ- အလကာင်္ကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း ဦးပြုံးချို မဟာဂီတမူ တောနှင့်တောင်စွယ်- ပြောကြမောင်မယ် (ငှက်ကယ်လူလို သံချိုနှောလို့ ပြောကြပြန်သကို)၂ ၊ သိုက်မြုံမှာလေ စာခွံ့ကျွေး ကျွေးတယ်ကို ၊ တကိုယ်ရေပန်းစေ မြိုင်တန်းဝေ ၊ ဖိုမမောင်နှံ မောင်နှံ တောင်ပံ ချီကာတွဲလို့ ဝဲကာပျံ ၊ တွန်ကျူးကျော်ညံ ငှက်ပေါင်းပျော်ကြပြန် ( မြိုင်စောင်းမှာ တူစုံမောင်နှံ) ၃ ကိန္နရီဟန်တွဲလို့ ဝဲကာပျံ၊ ကျူးကျော်ညံ၊ တိမ်ယံအာကာထဲ၊ မြင်လာဘဲ၊ သည်မောင်ပူဆွေး ကြုံရပြန် ၊ နတ်ကယ်ဖန် ဝေယံအာကာထဲက မဲမှောင်၊ မှင်ဦးရီမှောင် တိမ်တောင် ခြယ်ဆင့်ဆိုင်း၊ ( ရှူတိုင်းရယ်၊ ညိုရောင်ပြာရီ) ၂၊ ဘယ်ပန်းချီဟန် ရေးလို့စံမမှီ ။
U TIN playsamyanmar classic song called myamangiryi by slide guitar.
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddy MinGyi U Sa ရေးသူ -- မြဝတီမင်းကြီးဦးစ သီချင်းအမျိုးအစား -- အီနောင်ဇာတ်ထွက်ယိုးဒယား အဆို -- ဝင်းဦး အတီး -- အော်ဂင် တင်ဝင်းလှိုင်၊ စန္ဒယား အေဝမ်းခင်မောင် စက်လဲပျော်ပါနိူင် စက်လဲပျော်ပါနိူင်၊ နန်းပင်တိုင်ကြော့၊ ကြာရံလယ်၊ ယဉ်ရွေလုံ့၊ ရွှေကေသီ၊ စုံညီပျော်ပါး၊ ရွေဝန်းလျား။ မြယွန်းသန်းယံကျော်၊ နန်းဗဟို၇်ဆော်လဲ၊ ပျော်ပဲသား။ ဘယ်ဆီမှာ၊ ဘယ်ဘုန်းအား၊ ပြောတော်ငြား၊ ရှာလိမ့်မယ်၊ သူ့တိုင်းကြော့ ကာလံဝယ်၊ လွှမ်းတာကြွယ်လို့၊ ပူနယ်ပွား။ ဘယ်ဆီမှာ ဘယ်ဘုန်းအား၊ ပျော်တော်ငြား ရှာလိမ့်မယ်၊ သူ့တိုင်းကြော့ကာလံဝယ်၊ လွှမ်းတာကြွယ်လို့၊ ပူနယ်ပွား။ ။ Credit to http://myanmarclassical.wordpress.com/2012/02/14/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%82%8F%E1%80%B0%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9/
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddi Min Gyi U Sa လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး (မြင်းတက်ယိုးဒယား) မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ (လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး၊ ဟံသာဗွေလယ် ရွှေနန်းဦး၊ ထူးထူး ထွေလာ၊ ငါးပါး ပဉ္စင် ရွှေတံမြွာ)၂။ [(ခရာသံစုံ၊ ကျူးကြော်ညံဟုန် ခရာသံစုံ၊ ကျူးကြော်ညံဟုန် )၂၊ (ဘုံဝေယန် နန်းကြီးဗိမာန်)၂ (စီမံထူးခြား၊ များလျထွေထွေ များလျထွေထွေ)၂၊ စိန်မှန်နန်းမှာ၊ ဆန်းလှ ကုန်ခြွေရွေ]၂။ [ဆော်လေသွင်းမြူး၊ ကုန်ထူးကြေညာ၊ လေသာကွန်း၊ ဆောင်ယွန်းမှာ စုံစွာ၊ (သည်မှာကုန်ဆန်း၊ နန်းသိင်္ဂါ၊ ဖွယ်ရာထူးတဲ့ ကျူးကြော်ညာ)၂၊ (သည်မှာသာလေ ရွှေဘုံ သာမျိုးစုံလှ)၂ (နန်းဆောင်သာယာ တီးမျိုးစုံစွာ)၂၊ မှန်ကြာနန်းမှာ ဆန်းလှစုံစုံဖြာ။]၂။ [(ကြေညာ၊ သာယာပျံ့ ပျူး၊ သာယာ ကြေညာပျံ့ ပျူး)၂၊ (အိုလေ ဇေယျာဗွေမှာ ထွေဆန်းထူး)၂၊ (အိုတူဘူး၊ ဘယ်ရာဝင်မှာသာ)၂၊ (ဆန်းဆန်းထွေလှ ရွေရံကာ၊ ရွှေဘုန်းတေဇ၊ နေနှုန်းဖြာ)၂၊ ထီးတရာ၊ ညွတ်လာခညောင်း၊ သိန်းသောင်း မင်းပေါင်းဆက်ပဏ္ဏာ၊ စုံဆယ်ဖြာ၊ ဖူးညွတ်သွယ်ရှိကြာ]၂။ (ရှိခိုးတင်ဆင်ကာ၊ လူမှုး ဧကရာ)၂၊ ဘုန်းကွန်ချာ၊ သင်းပြန့် ကြေညာ၊ တေဇာနေ၀ါ၊ ထွေလာဝေဆာ၊ ကြေညာသင်းလှိုင်၊ ၀င်းမြိုင်၊ ဦးခိုင်စိုးတဲ့ မင်းပေါင်း၊ ညွတ်လာပျောင်း၊ ခညောင်းစုံစွာ၊ ဟံသာဗွေဦး၊ ထူးရွှေတေဇာ။ (ရာရာဆူမှုး၊ ဖူးလေစုံညီလာ)၂၊ ရွှေသင်္ခါနှင့် ဇေယျာစံချိန်၊ ရာဇာအာဟိန်၊ ဘုန်းမီးစက်ရှိန်၊ လျှံဝေဒေ၀ိန်၊ နွယ်လာနရိန်၊ ကြီးလှဂုဏ်သိန်၊ မင်း မင်းမဟိန်။ ထိန်ထိန်လင်း၊ ရာမင်းနွယ်သမ္ဘိန်။ ။
Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest 04. Attributes Of Tayza 05. Forest Of Flowers 06. A Sweet Song Of The . U Haing Win Aung - Pleasing Melody201 - Rain 02 - Dark Clouds The Forerunners 03 - The Silver Sandbank 04 - Myanmar Nationalities Innate Nature and MM .
Myanmar Classical: တောနှင့်တောင်စွယ် -Htar+Saung U Ba Than
the myanmar slide guitar U TIN ဉီ:တငျ myamangiryi မွမနျ:ဂိရိ
Myanmar Classical : စက်လဲပျော်ပါနိူင်-Win Oo
Myanmar Classical: လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး-Win Oo+Saung U Ba Than
U Hlaing Win Maung Myanmar Classical Songs vesves Pleasing Melody (II)
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddy MinGyi U Sa ရေးသူ -- မြဝတီမင်းကြီးဦးစ သီချင်းအမျိုးအစား -- အီနောင်ဇာတ်ထွက်ယိုးဒယား အဆို -- ဝင်းဦး အတီး -- အော်ဂင် တင်ဝင်းလှိုင်၊ စန္ဒယား အေဝမ်းခင်မောင် စက်လဲပျော်ပါနိူင် စက်လဲပျော်ပါနိူင်၊ နန်းပင်တိုင်ကြော့၊ ကြာရံလယ်၊ ယဉ်ရွေလုံ့၊ ရွှေကေသီ၊ စုံညီပျော်ပါး၊ ရွေဝန်းလျား။ မြယွန်းသန်းယံကျော်၊ နန်းဗဟို၇်ဆော်လဲ၊ ပျော်ပဲသား။ ဘယ်ဆီမှာ၊ ဘယ်ဘုန်းအား၊ ပြောတော်ငြား၊ ရှာလိမ့်မယ်၊ သူ့တိုင်းကြော့ ကာလံဝယ်၊ လွှမ်းတာကြွယ်လို့၊ ပူနယ်ပွား။ ဘယ်ဆီမှာ ဘယ်ဘုန်းအား၊ ပျော်တော်ငြား ရှာလိမ့်မယ်၊ သူ့တိုင်းကြော့ကာလံဝယ်၊ လွှမ်းတာကြွယ်လို့၊ ပူနယ်ပွား။ ။ Credit to http://myanmarclassical.wordpress.com/2012/02/14/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%B2%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%AB%E1%82%8F%E1%80%B0%E1%80%AD%E1%80%84%E1%...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddi Min Gyi U Sa လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး (မြင်းတက်ယိုးဒယား) မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ (လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး၊ ဟံသာဗွေလယ် ရွှေနန်းဦး၊ ထူးထူး ထွေလာ၊ ငါးပါး ပဉ္စင် ရွှေတံမြွာ)၂။ [(ခရာသံစုံ၊ ကျူးကြော်ညံဟုန် ခရာသံစုံ၊ ကျူးကြော်ညံဟုန် )၂၊ (ဘုံဝေယန် နန်းကြီးဗိမာန်)၂ (စီမံထူးခြား၊ များလျထွေထွေ များလျထွေထွေ)၂၊ စိန်မှန်နန်းမှာ၊ ဆန်းလှ ကုန်ခြွေရွေ]၂။ [ဆော်လေသွင်းမြူး၊ ကုန်ထူးကြေညာ၊ လေသာကွန်း၊ ဆောင်ယွန်းမှာ စုံစွာ၊ (သည်မှာကုန်ဆန်း၊ နန်းသိင်္ဂါ၊ ဖွယ်ရာထူးတဲ့ ကျူးကြော်ညာ)၂၊ (သည်မှာသာလေ ရွှေဘုံ သာမျိုးစုံလှ)၂ (နန်းဆောင်သာယာ တီးမျိုးစုံစွာ)၂၊ မှန်ကြာနန်းမှာ ဆန်းလှစုံစုံဖြာ။]၂။ [(ကြေညာ၊ သာယာပျံ့ ပျူး၊ သာယာ ကြေညာပျံ့ ပျူး)၂၊ (အိုလေ ဇေယျာဗွေမှာ ထွေဆန်းထူး)၂၊ (အိုတူဘူး၊ ဘယ်ရာဝင်မှာသာ)၂၊ (ဆန်းဆန်းထွေလှ ရွေရံကာ၊ ရွှေဘုန်းတေဇ၊ နေနှုန်းဖြာ)၂၊ ထီးတရာ၊ ညွတ်လာခညောင်း၊ သိန...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Harp Played by Saung U Ba Than တောနှင့်တောင်စွယ်(ယိုးဒယား ကြေးသွား) - ထား တီးခတ်သူ- အလကာင်္ကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း ဦြး...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddy MinGyi U Sa ရေးသူ -- မြဝတီမင်းကြီးဦးစ သီချင်းအမျိုးအစား -- အီနောင်ဇာတ်ထွက်ယိုးဒယား အဆို -- ဝင်...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddi Min Gyi U Sa လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး (မြင်းတက်ယိုးဒယား) မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ (လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး၊...
Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest 04. Attributes Of Tayza 05. Forest Of Flowers 06. A Sweet Song Of The . ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Harp Played by Saung U Ba Than တောနှင့်တောင်စ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddy MinGyi U Sa ရေးသူ -- မြဝ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Myawaddi Min Gyi U Sa လေပြည်ဆော်သ...
Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest 04....
Myanmar Classical: တောနှင့်တောင်စွယ် -Htar+Saung U...
the myanmar slide guitar U TIN ဉီ:တငျ myamangiryi ...
Myanmar Classical : စက်လဲပျော်ပါနိူင်-Win Oo...
Myanmar Classical: လေပြည်ဆော်သွင်းမြူး-Win Oo+Sau...
U Hlaing Win Maung Myanmar Classical Songs vesves ...